देशका लागि भए पनि राजीनामा दिन्नँः प्रधानमन्त्री ओली - Safalnews- News Portal from Nepal in Nepali.
देशका लागि भए पनि राजीनामा दिन्नँः प्रधानमन्त्री ओली
सफल न्युज द्वारा २०७७ कार्तिक १९ गते बुधबार १४:४३ मा प्रकाशित
पोखरा, कात्तिक १९ गते ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
बुधबार बिहान चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवन उद्घाटन गर्दै कुनै पनि परिस्थितिमा आफुले राजीनामा नदिने बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एकथरी व्यक्तिहरु देशमा अस्थिरता निम्त्याउन लागिरहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘एकथरी अस्थिरताको खेती गरिरहने देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्ने प्रयासहरु गर्न आद्दत छ । एडिक्ट भएका छन् कोही ।’
पछिल्लो समय पार्टीभित्रैबाट राजीनामा दिन दबाब सिर्जना भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले देशका लागि भए पनि राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘तपाईहरु विचार गर्नुस् के अहिले मैले राजीना दिन हुन्छ ? राजीनामा दिन मिल्छ ? मेरा लागि होइन देशका लागि मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु हो । त्यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छैन् । त्यो मैले दोहोर्‍याएर भनेको छु फेरी केहीले खोइत राजीनमा भनेर मागिराखेका छन् । बेकारको कुरा हो भन्ने सोच्छु ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो रहरले भन्दा पनि जनताको आवश्यकता र समर्थनले प्रधानमन्त्री बनेको समेत बताउनुभयो । कुनैपनि जालझेल तथा तिकडमबाट नभई व्यापक जनसमर्थनबाट प्रधानमन्त्री बनेकाले सरकार फेरिन्छ कि भन्ने द्विविधामा नपर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।